module စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > module စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
AOX-M စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးချ တွင် ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, shippတွင်g, စက္ကူ mတစ်ဦးkတွင်g, စွမ်းအား အပင်များ, heတစ်ဦးtတွင်g, buildတွင်g အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု နှင့် အခြား တွင်dustries.AOX ရှိပါတယ် 23 နှစ်ပေါင်း ၏ စုပုံခြင်း တွင် အဆိုပါ လယ်ယာ ၏ အရည်ဖြစ်သော ထိန်းချုပ်မှု တွင်dustry.Accordတွင်g သို့ အဆိုပါ ကွဲပြားခြားနားသော တွင်quiey ၏ အဆိုပါ စျေးကွက်, ကျွန်တော်တို့ ရှိ ဖွံ့ဖြိုးပြီး တစ်ဦး စီးရီး ၏ ပြောင်းလဲပစ် စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r. နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ ကောင်းသော reputတစ်ဦးtion ဖြစ် gတစ်ဦးတွင်ed အားဖြင့် အဆိုပါ reliတစ်ဦးbility နှင့် stတစ်ဦးbility performတစ်ဦးnce တွင် အဆိုပါ လယ်ယာ ၏ vတစ်ဦးlve အရည်ဖြစ်သော ထိန်းချုပ်မှု.
ISO5210 အဆိုအရ mounting အခြေစိုက်စခန်း
AOX-M စီးရီးများအတွက် 1. လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေးမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ်
2. အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်အနေအထား display ကိုရှင်းလင်းစွာအဆို့ရှင်၏ status ညွှန်ပြခြင်းနှင့် AOX-M စီးရီးမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ်။
1. ရှိပါတယ်ကောင်းသောညှိနှိုင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာစေရန်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator နှင့်ညှိနှိုင်းမှုယန္တရားပြောင်းလဲပစ်သည့် AOX-M စီးရီးအားလုံးအဆစ်မှာအဘယ်သူမျှမဖြည်ရှင်းလင်းရေးဖြစ်သင့်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုမူလီအညီအမျှနဲ့အချိုးကျတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်ရပါမည်။
ဂရုတစိုက်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကိုဖတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနှင့်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းအရသိရသည်အတည်ပြုရန်, မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ်သည့် AOX-M စီးရီးကို အသုံးပြု. ခင်မှာ3။ လျှပ်စစ် actuator စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်မီ, ထို site မှာ power supply ဗို့အားအဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ဝါယာကြိုးပုံမှအတိုင်းဝါယာကြိုးစစ်ဆေးပါ။ ဝါယာကြိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ Terminal ကို၏ဝါယာကြိုးမြဲမြံစွာဖြစ်သင့်အခါဝါယာကြိုးအရေအတွက်အာရုံစိုက်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာစက်တပ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-M စီးရီး၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
မေး: ဘယ်လို AOX-M စီးရီးဆိုကျေးဇူးတင်လွှာသွင်းကုန်၏မရှိဘဲမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ပြောင်းလဲပစ်မိန့်ပေးနိုင်သနည်း
မေး: သင်၏စက်ရုံမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator (သို့မဟုတ်အထုပ်) ပြောင်းလဲပစ်သည့် AOX-M စီးရီးပေါ်မှာငါတို့အမှတ်တံဆိပ် print ထုတ်နိုင်ပါသလား?
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ customers.We ထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်လေဆာပုံနှိပ်customerâ့လိုဂိုကိုပေါ်ရှိသင့်လိုဂို print ထုတ်ခွင့်ပြုပါရန်သင်တို့ထံမှတစ်ဦးခွင့်ပြုချက်စာတစ်စောင်လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
hot Tags:: module စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်